3D သမားများအတွက် Wings 3D [v1.4.1][Final] ** free !! Crack သုံးစရာမလို ~ IT Guide Myanmar
3D သမားများအတွက် Wings 3D [v1.4.1][Final] ** free !! Crack သုံးစရာမလို
ဒီနေ့တော့ 3d ဆွဲတဲ့ပရိုဂရမ်လေးတစ်ခုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ဖရီးလည်းဖြစ်တာကြောင့်ပါ ။
တစ်ချို့သိပြီးသားဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မှာပါ ။ မသိကြသေးတဲ့ 3D ကိုစိတ်ဝင်စားသူများအတွက်ပေါ့ ။
Export Format တွေကတော့ အောက်ကအတိုင်းပါပဲ ။
Import Format တွေကတော့
ဖိုင်ဆိုဒ် 8.67 MB ပဲရှိပါတယ် ။
လိုချင်တဲ့သူတွေ ဒီနေရာလေးမှာ ဒေါင်းယူလိုက်ကြပါ ။
Download Link ရှာရခက်နေသူများအတွက် ကျနော် Mediafire မှာတင်ထားပေးပါတယ် ။
ဒီနေရာမှာ ယူလိုက်ပါ ။
ဒေါင်းပြီး စမ်းလုပ်ကြည့်ကြပေါ့နော် ။